Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါ)
Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အအန်လွန်ရောဂါဆိုသည်မှာ ပြင်းထန်သောနံနက်ပိုင်းပျို့ခြင်း နှင့် အော့အန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုရောဂါသည်ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များပြောင်းလဲမှု (electrolytes နှင့် ketones ကဲ့သို့သောဓါတုဗေဒပစ္စည်းများပမာဏမမှန်ဖြစ်ခြင်း) နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းတို့ကိုဦးတည်စေပါသည်။ဤပြောင်းလဲမှုများသည်ဆေးရုံတက်ရသည်အထိဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အအန်လွန်ရောဂါ၏ဆိုးကျိုးများသည်ပြင်းထန်ပြီး ကျောက်ကပ် အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းနှင့်အသည်းတို့ကိုထိခိုက် ပျက်စီးစေပါသည်။
Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အအန်လွန်ရောဂါသည်ရှားပါးပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ၇၀% မှ ၈၅% သည် နံနက်ပိုင်းအော့အန်ခြင်းရှိကြပါသည်။ ၁% မှ ၂% သာလျှင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အအန်လွန်ရောဂါ ရှိကြပါသည်။ ကိုယ်ဝန်အအန်လွန်ရောဂါခံစားနေရခြင်းသည်ကလေးတစ်ယောက်ထက်ပို၍ (အမွှာပုူးနှင့် အထက်)ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများသည်များသောအားဖြင့်ကိုယ်ဝန်၏လေးပတ်နှင့်ရှစ်ပတ်ကြားတွင်စတင်ပြီး ၁၆ ပတ်အထိကြာပါသည်။ ဖြစ်ပွားသောအမျိုးသမီးအများစုသည်တစ်နေကုန်အော့အန်တတ်ပါသည်။
တခြားရောဂါလက္ခဏာများမှာမအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ဆီးသွားမှုနည်းပါးခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊သတိလစ်ခြင်းနှင့်အသားဝါခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ Ketones များဆီးထဲတွင်ပါဝင်ခြင်း၊သွေးခုန်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းခြင်းတို့သည်ရေဓါတ် ခမ်းခြောက်မှုကိုညွှန်ပြပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိသောလက္ခဏာများတွေ့ရပါကပိုမိုတိကျသောညွှွှန်ကြားချက်များနှင့် စောင့်ကြည့်မှုများအတွက်သင်၏ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းခေါ်ပါ။ သို့သော်လည်းသင်သည်မကြာခဏ ပြင်းထန်သောအော့အန်ခြင်းနှင့်သတိလစ်ခြင်းတို့ကိုခံစားရပါကအရေးပေါ်အလျင်အမြန်ဆေးရုံ တက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည်မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းသည် သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အမျိုးသမီးအများစုသည်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ပထမသုံးလတွင်မအီမသာဖြစ်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မအီမသာဖြစ်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်း၏အကြောင်းအရင်းသည် Human chorionic gonadotrotil (HCG) ဟုခေါ်သောဟော်မုန်းတမျိုးသွေးထဲတွင်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ယူဆရပါသည်။ (HCG) ကိုအချင်းမှထုတ်လွှတ်ပါသည်။
အချို့အမျိုးသမီးများသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်းမအီမသာဖြစ်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းများရှိပါသည်။ ကိုယ်ဝန်တိုင်းတွင်ဖြစ်တတ်သော်လည်းနှစ်မြွှာပူးနှင့် အထက် ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရသူများ သို့မဟုတ် စပျစ်ခိုင် ကိုယ်ဝန်ရောဂါရှိနေသူများတွင်ပို၍ဖြစ်ပွားပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အအန်လွန် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေသည် ငယ်ရွယ်စဉ်တွင်ကလေးရမှု၊ ကိုယ်အလေးချိန် (အဝလွန်မှု)၊ ယခင်ကကိုယ်ဝန်မဆောင်ဖူးသူ၊ ပထမဆုံးအကြိမ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နှင့် အရင်ကိုယ်ဝန် များတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အအန်လွန်ရောဂါဖြစ်ဖူးမှု တို့အပေါ်မူတည်၍ မြင့်တက်နိုင်ပါသည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအချက်များသည်လည်းအခန်းကဏ္ဍ တစ်ခုအနေနှင့် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန် ရောဂါကိုဘယ်လိုရှာဖွေစစ်ဆေးမလဲ။
ပြင်းထန်သောမအီမသာဖြစ်မှုနှင့် အော့အန်မှုတို့သည် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျခြင်း၊ ရေဓါတ် ခန်းခြောက်ခြင်း နှင့် ခန္ဓါကိုယ်တွင်းဓါတ်သဘောများပြောင်းလဲခြင်းတို့အထိဦးတည် လာသောအခါ ဆရာဝန်နှင့် ရောဂါစစ်ဆေးရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ပါ။ ဤလက္ခဏာများအားအခြားအရာများအား ဖြစ်စေသလားသိရှိရန် ဆရာဝန်သည် သွေးနှင့် ဆီးအားစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အာထရာဆောင်းခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများသည် မဆိုးရွှားပါကဘီစကွက်ခြောက်များ နှင့်အစာကိုခဏခဏနဲ့နည်းနည်းစားသောက်ပေးခြင်းဖြင့် သက်သာနိုင်ပါသည်။ အရည်များများသောက်ခြင်းဖြင့် သက်သာနိုင်ပါသည်။ ( သင်သည် ဆိုဒါဖျော်ရည်နှင့် အခြားစပါကလင်ဖျော်ရည်ကဲ့သို့ အမြှုပ်ပါသောဖျော်ရည်များသောက်သုံးမည် ဆိုပါကရေခဲများလောင်းထည့်၍ အမြှုပ်နည်းသွားအောင်လုပ်ပါ) ကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါရှိသောအမျိုးသမီးများသည် အကြောဆေးထိုးခြင်း၊ ဗိုက်တာမင်ဆေးသောက်ခြင်းနဲ့ဆေးရုံတက် ခြင်းတို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဆိုးရွှားစွာ နှင့် ကြာမြင့်စွာအန်သောအမျိုးသမီးများအတွက် အအန် ပျောက်ဆေးများပေးနိုင်ပါသည်။ အရည်များဝင်ပါကနူးညံ့သောအစာများ နှင့် အစာများကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစတင် စားသောက်ပါ။ ဤနည်းလမ်းများအလုပ်မဖြစ်ပါကပါးစပ်မှလွဲ၍ ကျန်သောနည်းလမ်းများမှ အာဟာရပေးခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းကကိုယ်ဝန်ဆောင် အအန်လွန်ရောဂါကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါလူနေမှုပုံစံများနဲ့အိမ်သုံးကုထုံးများသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အအန်လွန်ရောဂါကို ကုသသောနေရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဘီစကွတ်ခြောက်များပေါင်မုန့်မီးကင်များ နှင့် ကွေကာအုပ်ျများကိုမနက်စောစောတွင် စားသုံးပါ။
Hyperemesis gravidarum.https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001499.htm. Accessed Jul 14 2016
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009).The Merck manual home health handbook.Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 1645